Raw Nifuratel poda (4936- 47-4) hplc≥98% | AASraw R&D Reagents
/ Products / MaR & D Reagents / Nifuratel upfu (4936-47-4)
Rating: SKU: 4936-47-4. Category: MaR & D Reagents
MUTSVENE unobatanidzwa uye unokwanisa kugadzira kubva ku gram kusvika mukurongeka kweNifuratel powder (4936-47-4), pasi peCGMP mutemo uye trackable quality control system.
Raw Nifuratel powder Basic Characters
Molecular Kurema: 285.28
Raw Nifuratel powder mukushandiswa
Nifuratel powder Usage
Nifuratel powder isiri yemishonga inoshandiswa mune gynecology. Icho chinonzi antiprotozoal uye antifungal agent iyo inogonawo kupiwa muromo. Nifuratel powder haibvumirwi kushandiswa muUnited States. Kutorwa nemuromo, kana semukadzi wepessary, inoshandiswa mukurapa kwezvirwere zvakasiyana-siyana zvemukati wegito-urinary, kunyanya kana pasina kunyatsoongorora kunowanikwa. Semuenzaniso, inogona kushandiswa mukurapa kwevakadzi vakaratidza kubuda kwemudzimai apo kune kusava nechokwadi kana chikonzero chacho chiri Trichomonas vaginalis kana Matanda Candida akadai Candida albicans.
Nifuratel powder (Magmilor) yakafananidzwa nemetronidazole (Flagyl) mukurapa trichomonal vaginitis nemutambo unoshandiswa kaviri. Chero 18 kunze kwevarwere 47 (38%) yakarapwa neNifuratel poda yakasviba yakawanikwa kuporeswa, asi 42 kubva kune 49 varwere (85%) yakarapwa ne metronidazole yakapora. Kubudirira kwakanyanya, zvichida kubviswa kwehutano, kwakaitika muvatatu vatatu vanorapwa neNifuratel poda yakasviba. Kwakange kusina matambudziko akakomba ne metronidazole. Migumisiro yechirwere ichi inoratidza kuti Nifuratel powder haisi iyo inogutsa inotsigira metronidazole mukurapa trichomoniasis.
Yambiro paNifuratel powder
Nhamba yepamusoro Nifuratel powder yakadzika uye yakavhenganiswa aerobic vaginitis: A single-centre vanotarisira kuzarura-label cohort study
Kubudirira uye kuchengeteka kwezvikamu zviviri zveNifuratel powder miviri yekurapa aerobic vaginitis (AV) yakaenzaniswa.
Uyu aive anotarisira kubudiswa-label cohort kuongorora varwere vakawana uye vakaporerwa pa Tianjin Third Central Hospital pakati peJanuary 2012 naDecember 2013. Kubatana kwebhakitiriya vaginosis (BV), vulvovaginal candidiasis (VVC), kana / uye trichomonal vaginitis (TV; AV yakavhenganiswa) yakatemwa. Varwere vakashandurwa kuNifuratel poda yakasvibirira-500 (500 mg Nifuratel powder, intravaginal, mazuva 10) kana Nifuratel yakasvibira powusika-250 (250 mg Nifuratel powder, intravaginal, mazuva 10), uye yakatevera-kwema kwemazuva matatu kusvika manomwe mushure mekunge kupera kwapera . Mhedzisiro yepamusoro uye yechipiri yaive yekuvandudza mitengo uye zviitiko zvakashata, zvichienderana.
Chidzidzo ichi chaisanganisira varwere ve142 vane AV. Zera rakanga risina kunyanya kusiyana pakati pemapoka (n = 71 yega yega), uye kugoverwa kwezvirwere kwakafanana: 29 (40.85%) yakapusa AV uye 42 (59.15%) yakavhenganiswa AV (AV + BV, 42.86%; AV + VVC, 30.95% ; AV + TV, 26.19%). Mune varwere vane AV yakapusa, iyo yekudzoreredza mwero haina kusiyanisa zvakanyanya pakati peNifuratel poda mbishi (500 (26/29, 89.66%) neNifuratel powder ‐ 250 (22/29, 75.86%) mapoka. Mune varwere vane AV yakavhenganiswa, mareti ekudzoreredza aive akakwirira zvakanyanya muNifuratel powder ‐ 500 kupfuura muNifuratel powder ‐ 250 boka (AV + BV, 88.89% vs 50.00%; AV + VVC, 76.92% vs 30.77%; AV + TV, 90.91% vs 36.36%; ese P <0.05). Murwere mumwe chete (Nifuratel poda yakasviba ‐ 500) akataura chiitiko chakaipa (nyoro anaphylactic reaction).
Nifuratel powder 500 mg yakaratidza zvakanaka kliniki inobudirira yekurapa AV, kunyanya AV yakavhenganiswa, uye inopfuura yei 250 mg muyero mukurapa AV yakavhenganiswa.
Nifuratel powder (CAS 4936-47-4) inoratidzira basa rinorwisa antiprotozoary uye antibacterial uye rinopiwa neimwe fungicidal effect, asi haisi kushanda nehupenyu hwemhepo. Kubudirira kwaro kwokurapa kwakave kuongororwa mune vanopfuura varwere ve12,000. Chiitiko chakakura chechipatara neNifuratel powder chinosimbisa kuti mishonga iyi yakachengeteka uye inobudirira pakurapa trichomoniasis, bhakitiriya vaginosis, kubvumirana, uye kunyanya, kune varwere vane hutano hwakakanganiswa hwemadzimai. Meta-kuongororwa kwekliniki yekuenzanisa kuenzanisa Nifuratel yakasviba powudhi uye metronidazole (CAS 443-48-1) muhutachiona hwezvirwere zvakaitwa. Zvose zvakasiyana-siyana-metronidazole-inotongwa miedzo yakaitwa nevarwere vane hutachiona hwehutachiwana dzakabatanidzwa, zvichienderana nemitemo inotevera: 1) kurapwa kwakaongororwa zvose sekunyangarika kwezviratidzo nezviratidzo, uye kusagadzikana kwezvakagadziriswa kwehupenyu; 2) microbiological test yakaitwa nenzira yakakodzera idzo dzakashandiswa munguva ino. Zvirwere zvinomwe zvemakiriniki zvakasarudzwa, zvinosanganisira varwere vese 1767, 832 kubva kune avo vakabatwa neNifuratel powder uye 935 ne metronidazole. Migumisiro ye meta-analysis yakaratidza kuenzanirana pakati peNifuratel powder uye metronidazole: huwandu hwevarwere vakaporeswa mumapoka maviri aive 88.5% uye 90.0%, zvichienderana, pakuvapo kwehukama pakati pezvidzidzo (p = 0.342). Muchigadziriswa uye chinokonzerwa nemararamiro anoongorora, nguva yekutenderera yeHurds ratio inosanganisira 1 uye p values ​​yekuedza kuongororwa kwepakusiyano kusiyana kwehutano hwaiva 0.656-1.266, p = 0.582 (yakagadziriswa) uye 0.643-1.290, p = 0.599 ( migumisiro yemaitiro), maererano, kuratidza kufanana. Uyezve, zvimwe zvidzidzo zvinochengetedzwa uye ruzivo rwakakura rwekuchirapa rwakaratidza kuti kurapwa kwehuwandu hweNifuratel poda yakakosha kune varwere vane zvirwere zvakakanganiswa nemhaka yeTrochomonas vaginalis + Candida kana Trichomonas vaginalis + mabhakitiriya kana kuti bhakitiriya vaginosis uye yakavhenganiswa nebhakitiriya miti yakareba kupfuura ye metronidazole, pamusana pemabasa akawanda eNifuratel powder.
Nzira yekutenga Nifuratel powder kubva kuAASraw